Nzira Yokudzivirira Sei Spam On Viber - Semalt Expert Concerned
Wakatora mhinduro dze spam paViber mwedzi uno here? Pachinhu chakanaka chokuti iwe, iwe hausi wega, sezvo aya mharidzo ari kumativi ose.
Hakusi kupopotedzana kwemazuva ano kwakapoteredza, izvi kuzivisa kusagadzikana zviri kupedzisira zvichiwedzera. Icho chiri pamagariro ekuti nhasi zuva mabhuku matsva inowanzoshandiswa kushandisa uye kunyengera - locaweb com br painel.
Pano pane mamwe mazano anobatsira anobva kuna Ryan Johnson, nyanzvi inotungamirira Semalt , iyo ichakutungamirira mukuchengetedza vhesi yako yeViber kubva kumashoko e spam.
Tiri kunzwa huwandu hunoramba huchiwedzera hwekupikisa kubva kune Viber maklayari kuti vari kuwana mukana wakawanda we spam paViber. Zvimwe zvemashoko aya ndezvisingakoshi. Zvisinei, mazhinji acho ane ngozi. Kuita purogiramu kuedza kuwana ruzivo rwomunhu mumwe nomumwe, kutengesa nhamba dzekadhi, kana kunyange kuedza kuisa malware pane zvigadzirwa zvose zvakaverengwa, uye chiyero chikuru cheViber makambani anosimbiswa pamusoro pehupenyu hwekushandiswa.
Viber inofunga nezvekusununguka kwemashoko pakati peViber maklayi vane chikwata chakaiswa pafoni yavo. Sezvo ichibatanidzwa nefoni imwe nhamba, vatengi vanofungidzira vane imwe chete kana nhamba yakanyorwa yezvinyorwa, uye iyo zvinyorwa zvinosanganiswa nefoni. Izvi zvinoreva Viber inobatsira kuzivisa nhanho-asi inowedzera ichiita kuti ive yakakosha zvikuru kune spammers. Nenzira iyi, ivo vanonetseka kutumira spam kune Viber maklayiti.
Chero mamiriro ezvinhu, iwe unogona kudzivisa spammers, uye Viber iri kuedza kuita kuti zvive zvakaoma kuti vashambadzi vakuendesere iwe mashoko anotsamwisa.
Chii chiri kuitika, kumativi ose, ndeizvi: imwe spammer inoda kuti iwe uise pane kuwirirana, saka iye anounganidza nevanhu vakawanda mairi.
Mharidzo inotumirwa kune vose, spammer anosiya kuunganidzwa, uye iwe wakasara nehutano hwekunyora kwete nenzira ipi zvayo Bhuku reChikwata Chechidiki, kana nzira yekuwana purogiramu yakasara.
Vamwe Viber maklayari vakaona chiyero chepamusoro che spam chiri kutumirwa kumabhuku avo. Aya mazwi haatumwi neViber, uye haabvumirwi nesangano. Viber Media haisi uye haizombotumira zvigadzirwa kune vatengi.
Zvinosuruvarisa, izvi hazvirevi kuti vamwe vanyengeri vadzidzisi havasati vachiedza kushandisa sendima kutumira spam kuvanhu. Dzimwe nzvimbo dzekutsvaga dzakatotanga kupa zvinotumira kutumira mameseji e-spam kune vatengi kune mari, uye Viber iri kuedza kuvhara izvi pasi.
Pamusana pekuti iwe uri kuwana mharidzo yausingadi, izvi ndizvo zvaunofanira kuita:
1. Kana mumwe munhu akakutumira shoko re spam, rizarure uye usarudze zvisarudzo (pane iOS, iri ndiro gumbo riri kumusoro kwekona yekona).
2. Sarudza "Pakati pebhandi Uyu Mutungamiri", sezvinongoita iwe nguva dzose iwe nekwereti waunoda kubvisa.
3. Iwe unogonawo kutaurira spammer kuViber kuburikidza kuenda kune peji ino. Ita chinangwa chekutora "nyaya yakasiyana" uye uone kuViber iwe uri kuwana spam kubva kumuteereri. Kuwedzerwa, taurira Viber nhamba yerunhare ye spammer, uye ivo vachabata nayo kubva ipapo.
Tine chivimbo chekuti zvimwe zvinotevera zveViber zvinosanganisira simba rekuzivisa spam kunyanya mubasa. Nokuda kwezvino kuvhara mapato emhosva ari chinhu chakanakisisa chaungaita.